Yiqiniso, wonke umuntu ufuna ukubukeka emuhle, stylish, nenhle. Lokhu kudinga zizwakale kahle futhi ngendlela efanele, futhi izesekeli sokunene. Louis Vuitton scarves kuyoba ngaphezu ephelele ukuze ngubo. Ungakhathazeki, isithombe sakho kuzoholela nabanye injabulo ephelele.
Louis Vuitton scarves - konke kwaqala kanjani
Ake uqale nge umlando la izesekeli. Louis Vuitton scarves uvele 1854. Ubaba umdali lo imodeli wayengumbazi. Ngokwemvelo, lokhu kusho umfana wayejwayelene umsebenzi abaculi kanye izinsimbi. Kakade engu-14 Luis wahamba wayosebenza njengoba umsizi induna, silwenza amapotimende futhi iziqu. An umqondo isegazini isitayela uye wakuvumela ukuba banikele amakhasimende engavamile, izesekeli ezithakazelisayo.
Kancane kamuva wabonakala nezinye izakhi, ezinye zazo ziye zaba scarves Louis Vuitton. Kuze kube manje, baye elaziwa emhlabeni jikelele njengoba stylish kakhulu futhi ezithakazelisayo.
Isesekeli, egcizelela charm yakho
Louis Vuitton isikhafu akuyona nje komkhiqizo wangempela. Ngaphezu kwalokho, it is a real okunethezeka lento. Le nsiza Kuyazuzisa ngempela ngokungeza izingubo zakho. Njengoba wathenga isikhafu Louis Vuitton, nakanjani pamper bayokudla ukugcizelela isitayela sakho, ubuntu kanye charm yemvelo. Qiniseka ukwaba lokhu yokugqoka phakathi abantu abaseduze kwabo kunoma imuphi umphakathi.
Louis Vuitton scarves zenziwa ngezinto zemvelo, wemasayizi nemibala ehlukene. Yoboya noma cashmere amaphethini, ethafeni noma variegated - Kunoma yikuphi, le mikhiqizo imisebenzi yangempela yobuciko.
Ungakwazi pick up isikhafu ukuthi udinga - yimuphi ukuthungwa, umbala, isayizi, nganoma yisiphi isikhathi sonyaka noma ugqoke. Kamnandi isikhafu ifindo ngempela ukugcizelela owuthandayo obucayi amehlo omhlaba lihle yayo.
amaqoqo amaningi yasekuqaleni
Yini enye engase ishiwo lezi onobuhle? Louis Vuitton isikhafu - accessory oluthandayo amadoda nabesifazane abaningi. Kwaphela iminyaka eminingi he was fike of kakhulu brand abadumile. umkhiqizo ngamunye izinga okusezingeni eliphezulu kakhulu, hhayi nje kuphela, kodwa futhi design ezithakazelisayo.
Lokhu isikhafu Louis Vuitton akunzima ukufunda. Into Brand ubonakale kude by logo yayo LV, imbali namahlamvu ezine futhi chetyrohkonechnoy inkanyezi.
Abaklami Oholela bahlakulele izesekeli esiyingqayizivele kunazo. Lezi scarves zenzelwe kulabo bantu bazi ukuthi ukuba siqonde ubuntu, kulabo abazimisele achithe isikhathi sabo wezigqoko. Kuningi amaqoqo elite kwenza abantu ukuthenga izinto eyingqayizivele ngempela yasekuqaleni.
Njalo ngezikhathi kukhona into entsha kanokusho. Izinhlobonhlobo zemibhalo sokujabulisa amakhasimende izinga yabo futhi intengo. Noma kunjalo, ngaso sonke isikhathi imfashini.
Louis Vuitton isikhafu - ukuqoqwa esiphelele stylish kakhulu ikhabethe izingcezu ukuthi kukhona ephelele ezahlukene izitayela zokugqoka. Hlanganisa nabo zakudala futhi kungaba amasudi ezibizayo, futhi abavamile izinto zansuku zonke.
By the way, lezi scarves akuzona kuphela entanyeni, kodwa futhi njengoba i imihlobiso abavamile, ezifana esikhwameni noma ngisho kwi izihlakala.
A indima ebalulekile ekwakheni isithombe kwesokudla
It ikuvumela ukwakha isithombe Chic somuntu fashion house Louis Vuitton. owesilisa isikhafu noma owesifazane esithombeni kudlala indima zincane kunamanye izakhi. Musa kufana nokuthela amanzi emhlane anikeze umbono umhlobiso ubuhlakani, ubuhle kanye ukuphelela.
Louis Vuitton isikhafu (wokuqala) - uyisibonelo esiyingqayizivele, yathela kwenye yezindlu edume kakhulu imfashini. Ufuna ukuqala sebelazi brand? Ungathanda ukuhlola umthelela waso esithombeni sakho? Thola omunye onobuhle Louis Vuitton.
Ngokuvamile, lokhu isikhafu ukhangwa ukunakwa kwakho. Design Unique, sokuhlonishwa, ubuhle, banganhlanhlatsi, isizotha ngamabomu - konke lokhu kuhlangene ukwenza imifanekiso.
Scarves zisobala hhayi asiqokomisa imibala zokuhlobisa noma elikhanyayo - yonke into ku-design ezithakazelisayo ngomkhiqizo ngamunye. Mat ayebuthaka enhle, ukuthungwa elithambile, inhlanganisela ephelele izakhi eziyisisekelo kokugqokwa kwansuku zonke - bonke laba izimfanelo ukuvumela ukujabulela accessory Chic, ekhokha intela kwabase-ukunambitheka umnini wayo.
Flawless zangaphakathi nezangaphandle umthengi izakhiwo scarves uvumele ikhasimende ngalinye ukuze uthole umkhiqizo ngendlela esilindele yakho. AmaKhaladi noma ezinombala ofanayo onobuhle ayokhonza njengamakhosi umphelelisi ephelele kunoma isiphi isambatho.
Qiniseka ukuthi ugqoke idatha scarves, uyoba njalo ukuzwa ayethule inani Amazing of izilokotho. nolwanga lwakho bayokwazisa abantu osondelene nabo bomdabu!
Indlela ukusetha iwashi G-Shock? Amathiphu ambalwa